मिर्मिरेको १००% हकप्रद बुधबारदेखि खुल्दै, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » मिर्मिरेको १००% हकप्रद बुधबारदेखि खुल्दै, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
काठमाडौं - असार २७ गतेदेखि मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको १००% हकप्रद सेयर बिक्री खुला हुने भएको छ । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । यो हकप्रद मा जेठ १७ गतेसम्म कायम सेयरधनी साउन २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ ।